တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ယုံရခက်သွား စေမယ့် ပုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeFunတစ်ကယ့် အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ယုံရခက်သွား စေမယ့် ပုံများ
October 20, 2021 Yan Fun 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် လားဆိုတာ ယုံရခက်စေမယ့် ပုံလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ပုံလေးတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ လေပေါ်ဝဲနေတဲ့ ထိုင်ခုံ
အခုပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ လေပေါ်ဝဲနေတဲ့ ထိုင်ခုံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုင်ခုံမှာ ထောက်လေးကြောင်း ပါပေမယ့် တစ်ချောင်းထဲသာ အပြည့်အ၀ပါဝင်ပါပြီး ကျန်တဲ့ သုံးခုကတော့ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်မနေပါဘူး ။ ဒီလိုမျိုး ထောက်တစ်ချောင်း ထဲနဲ့ လူထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတာလေးက တစ်ကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ လူ လက်ဝါး အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ ချိတ်
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ လူ့ လက်တစ်ဝါးစာ အရွယ်အစား ရှိတဲ့ ချိတ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ချိတ်ကြီးကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးတာလဲဆိုတာကတော့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပါ ။ ပုံမှန်ထက် ပိုကြီးတဲ့ ချိတ်အရွယ်အစား မျိုးစုံရှိပေမယ့် ဒီချိတ်ကတော့ အတော်လေးကို ကြီးလွန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ကိုယ်ချင်းဆက်နေတဲ့ ခွေးလေး
အခူ မြင်နေရတာကတော့ ကိုယ်ချင်းဆက်နေတဲ့ အိမ်မွေးခွေးလေး နှစ်ကောင်ရဲ့ ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ နာမည်ကတော့ Michelle နဲ့ Parker လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ပုံလေးကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် Photo Edit App နဲ့ လုပ်ထားတာလားလို့ ထင်နိုင်ပေမယ့် တစ်ကယ်တော့ ကိုယ်ချင်း ဆက်နေကြတဲ့ ခွေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ မြေဩဇာ ကောင်းတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်း
ဒါကတော့ တောင်တန်းတွေ ကြားမှာ တည်ရှိနေတဲ့ မြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းကို ကောင်းကင်ယံကနေ တွေ့မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သေချာကြည့်ရင် တောင်တန်းတွေ ကြားမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ချောင်နဲ့ တောင် တူနေပြီး မြေဩဇာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အရပ်ဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းကင်ပေါ်က ကြည့်ရင်တောင် ဒီချိုင့်ဝှမ်းနေရာက စိမ်းစိုနေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ဖုန်း Screen ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ငှက်ကလေး
HummingBird လို့ ခေါ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေဟာ အလွန်လည်း လျင်မြန်သလို လူတွေနားကို သိပ် ကပ်လေ့ ကပ်ထ မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အခုပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့ hummingbird လို့ ခေါ်တဲ့ ငှက်လေးကတော့ ဖုန်းscreen ကို စိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့် လူနားကပ်ရတာကိုတောင် လန့်နေပုံ ပေါ်မနေပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ အနီရောင် နာနတ်သီး
ဒါကတော့ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ အချင်းချင်း စားဖို့အတွက် ဝယ်လာတဲ့ နာနတ်သီးကို ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အနီရောင် နာနတ်သီး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာနတ်သီး အများစုရဲ့ အတွင်းပိုင်း အသားဟာ အဝါရောင် အဆင်းရှိပေမယ့် ဒီ နာနတ်သီးကတော့ မျိုးကွဲတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၇ ။ လက် ( ၄ ) ချောင်းပဲ ပါတဲ့ အမျိုးသား
အခုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ အမျိုုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ပုံစံကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ လက် က လက်ချောင်းတွေဟာ ( ၄ ) ချောင်းပဲ ပါပြီး လက်သန်းနေရာမှာ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိပဲ ပုံမှန် လက်တွေလိုမျိုး အပြည့်အ၀ပုံစံ ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ယုံရခက်သွား စေမယ့် ပုံတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
Shwe Khit Online TV မှရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ ကူးယူဖော်ပြခွင့် မပြုပါ။
နေစကြဝဠာကြီးထဲက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး အချက်အလက်များ